हाम्रो नेपाल, राम्रो नेपाल - Page4of 12 - KHASOKHAS
बशन्तपुर दरवार क्षेत्रमा पुननिर्माण तीब्र (फोटो फिचर)
दुई वर्ष अगाडिको भूकम्पले नेपालमा भएका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका धेरै सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । त्यही भूकम्पको क्षतिले उठ्न नसकेको बसन्तपुर अब बिस्तारै उठ्ने तयारी गर्दैछ । चाइना एड र अमेरिकन राजदूतको सहयोगमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रले पूर्णता पाउन लागेको हो । पुननिर्माण कार्य ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने उदेश्यका साथ काम भइरहेको छ । …
दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट
दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच बाँडफाँड टुंगो लागेको छ। फोरम र राजपा नेताहरूको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि निर्वाचन क्षेत्र टुंगो लगाएको हो। दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार फोरमले १७ र राजपाले १५ निर्वाचन क्षेत्र पाएको फोरम नेता परशुराम बस्नेतले सेतोपाटीलाई बताए। दुवै पार्टीले सामूहिक उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा भाग लिने …
नेपाल संवत् ११३८ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस पात्रोलाई नेवार समुदायले मान्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय विभूति शंखाधर साख्वाले विसं ९३७ -इ सं ८८०) मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल संवतको शुरुवात गराएका थिए । नेपाल संवतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय संवतको मान्यता पाएको थियो । विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना …
धनको प्रतिक लक्ष्मी प्रफुल्ल पार्न सप्तरंगी र पाला (फोटो फिचर )
लक्ष्मी हिन्दु धर्ममा धन तथा सुन्दरताकी देवी हुन । तिहारमा काग,कुकुर ,गाई—गोरुको पूजासँगै लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । कार्तिक कृष्ण औँसीको दिन घरलाई सफासुग्घर पारेर लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मी पूजा गर्दा धनधान्यले परिपूर्ण भई आरोग्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । यसैगरी धन्तेरसको दिन पनि लक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजाआजा गरिन्छ । धन को प्रतिक लक्ष्मी …
तिलिचो ताल भ्रमण गर्ने बढे, जाने होइन त तिलिचो ?
विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित तिलिचो ताल भ्रमणका लागि पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ । दशैँ तिहारको बिदाको समय सदुपयोग गर्दै त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको संख्या बढेको हो । तिलिचो समुद्री सतहदेखि चार हजार ९१९ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । तालसम्म पुग्न हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट मेसोकोन्दा हुँदै छोटो पदमार्ग तयार भएपछि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको …
कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भन्ने उखान धेरैले सुनेको हो । यो जात्रा हाँडिगाउँमा मनाइन्छ। यस्तो जात्रा नेपालमा अरु कुनै ठाउँमा हुन्न। हुन पनि खटको टाउको (गजुर) उल्टाइने, देउतालाई माथि राख्ने, रथ पनि उल्टो घुमाउने र मैनको फूल प्रयोग गर्ने जात्रा अरु कहाँ हुन्छ त ? कोजाग्रत पूर्णिमादेखि तीन दिन सम्म यो जात्रा मनाइन्छ। किन मनाइँदो …
सैनिक मञ्चमा विशेष समारोहसहित संविधान दिवस
आज असोज ३ गते अर्थात तेस्रो संविधान दिवस। नेपालमा संविधान जारी भएको स्मरणमा आज संविधान दिवस मनाइएको छ। सरकारका तर्फबाट सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहसहित दिवस मनाइएको छ। सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवस विशेष समारोहका केही झलकहरु:-
अहिंशाको कामना गर्दै स्वयम्भूनाथमा दीप प्रज्वलन
विश्व शान्तिको कामना गर्दै स्वयम्भूनाथमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । बिसेसगरी बौद्ध धर्मलाई बुजाउने उक्त कार्यक्रममा बौद्ध धर्माओलम्बी मात्र नभै हिन्दू धर्माओलम्बीको पनि राम्रो उपस्थिती रहेको थियो
दक्षिणपुर्वी अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको छाता संगठन नाशाको अध्यक्षमा माधव ढकाल निर्वाचित भएका छन् । सेप्टेम्बर ४ मा सम्पन्न नाशाको १३औं अधिवेशनले अध्यक्ष ढकाल सहित २ बर्षका लागी २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । नर्थ क्यारोलीना निवासी व्यवसायी तथा ब्यांकर ढकालले जर्जीया निवासी शैलेन्द्रृ बज्राचार्यलाइ ३२० का विरुद्ध ४०९ भोटले पराजीत गरेका थिए । …
सुदुरपश्चिमबासीको महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व गौरा पर्व राजधानीमा पनि मनाइएको छ । सुदुरपश्चिमका बिभिन्न जिल्लामा घर भई काठमाण्डौ आई बसेका सुदुरबासीहरुले धुमधामले बर्षैपिच्छे भाद्र कृष्णाअष्टमीका दिन उपत्यकामा गौरा पर्व मनाउने गर्दछन् । राजधानीको टुडीखेलमा मनाइएको गौरापर्वका तस्विरहरु । गौरा सुदुर पश्चिम क्षेत्रको महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो । गौरा पर्व विशेष गरेर डोटी र कुमाउँमा …